နေ့စဉ်သုံးအင်္ဂလိပ်စကားပြောလေ့လာရအောင် (အပိုင်း ၃) - Myanmar Network
Posted by Language Republic on September 19, 2014 at 10:30 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
နေ့စဉ်သုံးအင်္ဂလိပ်စကားပြော လေ့ကျင့်ခန်းတွေထဲက ကြားဖူး၊ ပြောဖူးတဲ့ ထသွားလာသွား စကားပြော တွေကို နည်းနည်း အတွင်းကျကျ ရှင်းပြချင်ပါတယ်။ လွယ်ကူ ရိုးစင်းတဲ့ စကားပြော တွေဖြစ်ပေမဲ့ စနစ်တကျနဲ့ ပြောတတ်တော့ ပိုကောင်းတယ်ထင်လို့ပါ။ ဒီနေ့ အပိုင်း (၃) မှာတော့ အခန့်သုံး မိတ်ဆက်စကားပြောတွေမှာ သုံးတဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေကို လေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Mr. Wilson : How do you do, Dr. Smith.
Dr .Smith : How do you do
Margaret : Dr. Smith is an economist. He’s just finished writingabook on international trade.
အထက်ပါ ဖော်ပြပါ မှာ လူ ၃ ဦးပါဝင်ပါတယ်။ Margaret ၊ Mr Wilson ၊ Dr Smith တို့ဖြစ်ပါတယ်။ Mr Wilson နှင့် Dr Smith တို့ ကို Margaret က ကြားကနေ မိတ်ဆက်ပေးတာ ဖြစ်ပါ တယ်။ Dr Smith ဆိုသူကို Mr Wilson ထံခေါ်လာပြီး မိတ်ဆက်ပေးတာပါ။ Margaret ပြောပုံကို စိတ်ထဲမှာ နားထောင်ကြည့်လိုက်ပါ။
Mr. Wilson, (pause for one second) I’d like you to meet Dr. Edward Smith.
Margaret က Mr Wilson ရဲ့ နာမည်ကို အသံမြင့်ပြီး intonation နဲ့ ပြောရပါမယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အင်္ဂလိပ်စကားနဲ့ မိတ်ဆက်တဲ့အခါ မိတ်ဆက်ခံရသူရဲ့ နာမည်ကို အသံနှိမ့်ပြီးခေါ်ရင် စိတ်မပါတဲ့ သဘောပါလို့ မယဉ်ကျေးဘူးလို့ခံယူကြလို့ပါ။
နောက်ပြီး I'd like to ဆိုတဲ့ phrase မှာ /d / အသံကို ကြားအောင် အသံထွက် ပြောရတယ်။ မဟုတ်ရင်
I like ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ် မတူတဲ့ အခြား phrase တစ်ခုနဲ့ ရောသွားလိမ့်မယ်။
(I would like = I'd like = I want)
How do you do ကတော့ မေးခွန်းပုံစံ ဖြစ်ပေမဲ့ မေးခွန်း မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကတော့ ယဉ်ယဉ် ကျေးကျေး လေးမိတ်ဆက်တဲ့အခါ သုံးတဲ့ expression ဖြစ်ပြီးမေးသူရော ဖြေသူပါ ပြောကြတယ်။ How do you do ကို ပြန်ဖြေသူက ပြောတဲ့အခါ ပထမ စပြောတဲ့ သူရဲ့ intonation အတိုင်း လိုက်ပြောလိုက်ရုံပါဘဲ။ တစ်ကယ်တော့ How do you do ဟာ မေးခွန်းမဟုတ် အဖြေလည်းမဟုတ် expression ဖြစ်ပြီး မိတ်ဆက်သူ ၂ ဦး က အပြန်အလှန် ဒါမှ မဟုတ် တစ်ပြိုင်နက် ပြောကြပါတယ်။
He's just finished writingabook on International Trade. just + finished + V3 ကို သုံးတာက တစ်စုံတစ်ခုကို ပူပူနွေးနွေးလုပ်ပြီးသွားတာကို ပြောတာပါ။ He's just finished writingabook ဆိုတော့ စာအုပ် တစ်အုပ် ရေးပြီးပြီလို့ပြောတာ။ (has+ finished+ writing)
နောက်ထပ် has finished+V3 အသုံး တစ်ချို့ကို ကြည့်ရအောင်။
I've just finished reading ...
I’ve just finished cleaning ...
She's just finished correcting ...
They've just finishing putting ...
နောက်တစ်ခု က Finished နေရာမှာ start/ begin တို့ကို V-ing နဲ့ တွဲသုံးရင် တစ်ခုခုကို စတင်ရုံလေးရှိ သေးတယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်။ (just + start/ begin + V-ing )
He's just started writing ...
I've just started reading ...
She's just started correcting ...
Just + V3 ကို သုံးရင်တော့ မကြာသေးခင်က ပြီးဆုံးသွားတဲ့ action ကို ပြောတယ်။ ဥပမာ-
He's just written …
We've just eaten ...
I've just heard ...
They've just returned ...
နောက်ပြီး I've read ဆိုတဲ့ phrase မှာ /v/ အသံ ကို ကြားအောင် အသံထွက် ပြောရတယ်။ မဟုတ်ရင်
I read ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်မတူတဲ့ အခြား phrase တစ်ခု နဲ့ ရောသွားလိမ့်မယ်။
အသုံးဝင်သော အင်္ဂလိပ်စကားအသုံးအနှုန်းများ (Worry/ Afraid/ Bad/ Too Bad...
Permalink Reply by Yi Yi Win on September 2, 2015 at 22:53
Permalink Reply by Minn Lwin Oo on March 7, 2016 at 17:35
write ရဲ့V3 က written မပာုတ်ဘူးလား! finished + V3 ဆိုပြီး Ving တွေကြီးပဲသုံးထားတယ်။ တချက်လောက်ရှင်းပြပေးပါလား!!